बधाई ! नेपालका आयुषले दिए भारतको‘सारेगमप’मा धमाकेदार प्रस्तुती (हेर्नुहोस् भिडियो) - सुदूर नेपाल
बधाई ! नेपालका आयुषले दिए भारतको‘सारेगमप’मा धमाकेदार प्रस्तुती (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं ।भारतमा हुने विभिन्न रियालिटी शो हरुमा नेपालबाट सहभागी हुने प्रतिस्पर्धीहरुले आफ्नो जोडदार प्रस्तिती दिदै सबैको मन जितेर आएका छन् । विभिन्न डान्स र सिङगिंग रियालिटी शो नेपल्बता सहभागिता जनाउने प्रतिस्पर्धीले आफ्नो प्रभाव छोडेर आएका छन् । त्यस्तै भारतको चर्चित रियालिटी शो सारेगमप लिटिल च्याम्समा नेपालका २ जना बालकहरुले सहभागीता जनाईरहेका छन् ।
ईटहरीका प्रितम आचार्य र सिन्धुपाल्चोकका आयुष केसीले शोमा नेपालको नाम चम्काईरहेका छन् । जि टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको आजको एपिसोडमा १२ बर्षीय आयुष केसीले आफनो धमाकेदार प्रस्तुती दिएका छन् ।
जजहरु अमाल मलिक , सान र ऋचा शर्माले प्रशंसा गरेका थिए । जुरीबाट आयुषले ९८ प्रतिशत स्कोर पाए । उनले नेपाली पोशाकमा छातीमा नेपालको झण्डा र शिरमा ढाका टोपी लगाउँदै बिदेशी भुमिमा गीत गाउँदा सबै नेपालीले गर्व महसुस गरेका छन् । उनले गीत गाईसकेपछि नायक अनिल कपुरले पनि आयुषको चर्चा गरे । नेपालका यी बाल प्रतिभा हरुले भारतकै चर्चित शो मा गएर जोडदार प्रस्तुति दिदै देशकै मन रोशन गरेका छन् ।
आयुष चर्चित गायक अमृत क्षेत्रीका संगितका शिष्य । शोमा अन्य भारतीय प्रतियोगीहरु निकै प्रतिभाशाली रहेका छन् त्यसैले आयुषका लागि शोको यात्रा सहज भने हुने छैन ।
उनले १९४२ अ लभस्टोरी फिल्ममा समाबेश कुमार सानुको आवाजमा रहेको कुछ ना कहो बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुती निकै सुमधुर थियो ।उनले नायिका मनिषा कोईरालासंग १९४२ अ लभस्टोरीमा काम गर्दाको क्षण स्मरण गर्दे आफना ती क्षणहरु पनि सेयर गरेका थिए । सुरशाला आइडलका बिजेता समेत रहेका आयुष भक्तपुरको मोर्डन स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्यनरत रहेका छन् । उनी संगित भनेपछि सानैबाट भुतुक्क हुने गर्थे । भोली अर्का प्रतियोगी प्रितम आचार्यले आफनो प्रस्तुती दिनेछन् ।
Previous Post: बधाई । हङकङसंग नेपालकाे उत्कृष्ट बलिङ, नेरी थापा लिइन ६ विकेट
Next Post: दीपक बोहरा,कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा प्रवेश:लोहनी र पशुपतिलाई लाग्यो झट्का